Dood Ka Dhalatay Hadalkii Trump Ee Shakiga Galiyay Xil Wareejinta Haddii Laga Guuleysto – Borama News Network
Dood Ka Dhalatay Hadalkii Trump Ee Shakiga Galiyay Xil Wareejinta Haddii Laga Guuleysto
Hogaamiyaha sanetka ee xisbiga Jamhuuriga Mitch McConnell ayaa sheegay in “si nidaam leh ” doorashada ka dib loo maareyn doono xilliga kala guurka ka dib markii uu madaxwayne Trump su’aal galiyay geedi socodka doorashada iyo sida loogu kalsoonaan karo.
Mr McConnell oo ka mid ah sanatarada ugu sarsareeya ayaa xusay in cidda ku guuleysataba doorashada madaxwaynanimada 3 November in caleema saarka uu qabsoomi doono 20 bisha January.
Waxaa uu intaa ku daray in sidii caadada u ahayd Mareykanka afar sano kasta tan iyo sanaddii 1792 ay xil wareejinta dhici doonto haddii Trump doorashada looga guuleysto.”
Sidoo kale Sanatrada kale ee xisbiga Jamhuuriga ayaa iyagu ballanqaaday in si nidaam ah oo amman ah ay doorashada ku dhici doonto.
Sanatar Lindsey Graham,oo ay si aad ah isugu dhaw yihiin madaxwayne Trump ayaa ka mid sanataradaa balanqaaday in si nabad ah ay wax walba ku dhici doonaan.
Sanatar Mitt Romney ayaa dhankiisa si adag uga hadlay arrintan isaga oo sheegay in haddii ay dhacdo in madaxwaynaha uu dastuurka xushmayn waayo ay arrintaasi tahay mid aan loo dulqaadan doonin.
Maalin ka hora ayay ahayd markii madaxwayne Donald Trump uu diiday in uu ballanqaado xil wareejinta haddii doorashadaa looga guuleysto.
Mr Trump ayaa yiri “waan arki doonaa waxa dhaca”.
Waxaa uu shaki galiyay codeynta ku dhaceysa qaabka Boosatada ah, balse saraakiisha dooarsahad ayaa ku adkeystay in boostado tahay mid la isku haaleyn karo.
Madaxwayne Trump ayaa imika dhanka ra’yi uruurinada ka hooseeya musharaxa xisbiga Dimuqraadiyada Joe Biden, xilli ay doorashada ka hartay 40 maalmood.
Sanadkan tira aad u badan oo codbixiyayaasha Mareykanka ah ayaa codadkooda ku dhiibanaya qaab Boosta ah, taasi oo ka dhalatay feyriska corona, islamarkana waxaa uu Mr Trump uu su’aal galiyay ammaanka nidaamka codeynta ee Boostooyiinka.
Musharax kasta oo doorashada madaxwaynanimo Mareykanka looga adkaado ayaa waxaa caado ahayd in uu aqbalo islamarkana uu qiro in uu guuldareystay.
Maxaa dhici kara haddii uu Trump diido xil-wareejinta?
Haddii uu diido in uub aqbalo natiijada doorashada, waxay dalkaasi arrintaasi u horseedi karta waji cusub oo aan looga baran.
Mr Biden ayaa soo jeediyay haddii ay arrintani dhacdo, in militariga ay xoog uga saaraan Mr Trump aqalka cad.
Barbara McQuade oo horay usoo noqday xeer ilaaliyaha Michigan, haddana ah macallin culluunta sharciga ka bara jaamacadda Michigan ayaa wargeyska The Atlantic ee kasoo baxa dalka Mareykanka u sheegay in haddii madaxweyne Trump uu ku adkeysto in uu xafiiska sii joogo marka uu dhammaado muddo xileedkiisa, laamaha ammaanka ay ka shaqeyn doonaan sidii xafiiska looga saari lahaa.
“Madaxweyne Trump waxaa uu markiiba luminayaa awoodda uu siinayo dastuurka dalka Mareykanka maadaam uu dhammaaday muddo xileedkiisa”, ayuu yiri Barbara.
Qaar kamid ah warbaahinta maxalliga ee Mareykanka ayaa kusoo warramay in haddii madaxweynaha uu dhamaado muddo xileedkiisa ama xilka laga qaado, balse uu ku adkeysto in uu xafiiska sii joogo uu weynaya awoodda uu ku amro ilaalada madaxweynaha ama dhammaan ciidamada Mareykanka ee ka amar qaata.
Maadaama madaxweyne Trump uu yahay taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka, waxaa sidoo kale meesha ka baxaya awoodda amar-siinta ciidamada Mareykanka.
Madaxweyne Trump oo markaas noqon doono muwaadin caadi ah ah ayaa waxaa meesha ka baxaya xasaanadii uu lahaa ee ahayd in aanan wax dacwad ah lagu soo oogi karin inta uu xilka hayo, waxaana dhici karta in la xiro, laguna soo oogo dacwad ah in uu si sharci darro ah ku joogay xafiiska.
Ku Naso Ruwaayada Reer Jabuuti Iyo Qosolkii Aduunka
Maxaa U Sabab Ah In Militariga Masar Ay Ka Awood bataan Kuwa Turkiga? Akhriso
Amaanka Magaalada Jawhar Oo Si Wayn Loo Adkeeyay Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Doorashada Hirshabeele
Bnnstaff Bnnstaff November 10, 2020
Wada-hadallo U Bilaawday Dowladaha Turkiga Iyo Masar
Bnnstaff Bnnstaff October 19, 2020
Bangiyada Dalka Sweden Oo Joojiyay Xisaabihii Xawaaladaha Somalida Iyo Qaylo Dhaan Loo Diray Somaliya
Bnnstaff Bnnstaff November 9, 2020